Iingcebiso ezi-5 eziSebenzayo zokuGuqulwa kokuSebenza okuPhumeleleyo kubaThengi | Martech Zone
Iingcebiso ezi-5 eziSebenzayo zokuGuqulwa kokuSebenza okuPhumeleleyo kubaThengi
NgoLwesihlanu, Matshi 8, 2019 NgoLwesithathu, Oktobha 14, 2020 UJack Poyntz
Nantsi ingxelo efanelekileyo yolwazi: 52 ekhulwini Ukugcwala kwewebhu kwihlabathi liphela kuvela kwii-smartphones. Inani labantu abasebenzisa iifowuni eziphathwayo liyenyuka. Kulapho uninzi lwabantu lufumana iimveliso okanye iinkonzo zakho.
Akukho mathandabuzo ngayo.
Amashishini kufuneka enze ngcono izisombululo zawo zewebhu ukuze afike ngaphambi komdlalo. Elona jelo liphambili apho abantu abaninzi beye kukhangela ivenkile ekufuphi yekofu, ikontrakta elungileyo yophahla, nangayo nayiphi na into enokufikelelwa nguGoogle.
Kodwa ngaphandle kwesisombululo sewebhu esiphathwayo nesenziwe kakuhle kwishishini lakho, kunzima ukukhuphisana nabanye. Kwishishini le-e-commerce, umzekelo, kwafunyaniswa ukuba Iipesenti ezingama-55 zabathengi bathenga xa befumanisa imveliso ngeselula yabo.
Musa ukushiywa ngaphandle! Nazi iingcebiso ezi-5 ezisebenzayo zokunyusa izinga lokuguqulwa kwakho.
1. Indawo yokuHamba ngeSiza esiSelfowni yeyona nto iphambili kuwe
Ukukhawuleza kubalulekile xa kuziwa kwiindawo ezihambahambayo.
Inyaniso, uphando lubonisa ukuba iiwebhusayithi ezihambayo ezilayisha imizuzwana emi-5 okanye ngokukhawuleza zinokuvelisa ukuthengisa okuphezulu kunoko kuhamba kancinci. Abemi be-Intanethi abakunyamezeli ukulayisha kancinci. Kucingwa njengesiqalekiso kwiwebhusayithi yakho ephathekayo.
Ngethamsanqa, unokwenza iindlela ezininzi zokulungisa le ngxaki.
Ukunciphisa izongezo kwiselula yakho. Inani lezicelo zeseva kwiwebhusayithi yakho linokuchaphazela kakhulu isantya salo. Ngaba usebenzisa ii-trackers ezininzi okanye izixhobo zohlalutyo? Jonga ii-insides zesoftware yakho; mhlawumbi ungayifumana ingxaki apho.
Ungaze ulibale malunga phezulu ukuya ezantsi ukuxilongwa. Mhlawumbi ezinye iifayile zenza umonakalo kwinkqubo yakho. Iifayile ezinkulu ezinje ngemixholo ebonakalayo zinokucothisa isantya somthwalo wakho. Ke, unokufuna ukunciphisa iifayile zakho kwiwebhusayithi yakho. Imifanekiso, i-ad-tech, kunye nenombolo yefonti zizinto eziqhelekileyo ezisisiseko koku.
Funda malunga umxholo efuna ukubekwa phambili. Zibeke phezulu kwiphepha lakho, ekufuneka lilayishe kuqala ngaphambi kwenye into kwiwebhusayithi. Esi sicwangciso sinokunyusa isantya sakho somthwalo ngelixa sithathela ingqalelo amava omsebenzisi we-UX wesiza.
2. Khetha uyilo oluPhendulayo ukuze ulungele ukuSelfowuni
Uyilo olushukumayo oluphendulayo kunzima ukwenza. Kuya kufuneka uhlengahlengise kubungakanani obahlukeneyo bescreen. Kodwa ukufuna akupheleli apho. Kuya kufuneka ujonge ulwahlulo lwefowuni olwahlukileyo kunye neqonga.
Ungagxila kumaqhosha okuhamba ngokulula. Iimenyu okanye iindidi kufuneka kube lula ukuzicofa. Iphepha ngalinye kufuneka linike umsebenzisi icace gca ukuba bayaphi xa befuna ukufezekisa into efana nokongeza into kwinqwelo, ukucima izicelo, okanye ukukhangela iiodolo.
Uyilo loyilo kufuneka lube bhetyebhetye. Kuya kufuneka ukuba ibenakho ukufikelela kwizisombululo zokubhala, imifanekiso, kunye nobukhulu bevidiyo. Khumbula nje, izisombululo eziphathwayo kufuneka zibekwe phambili. Amaphepha angenasiphelo, izicatshulwa ezinkulu, kunye nemixholo ebanzi ebonwayo zizinto ezipheleleyo zokucima iindwendwe zakho.
3. Susa iiPop-up neeVideos ezingafunekiyo zaBasebenzisi baSelfowuni
Ezo popes zine pesky kunye neentengiso zevidiyo zinokonakalisa uyilo lwakho lwewebhu xa zizonke, kunye nenqanaba lokuguqula kwakho.
Nokuba ulunge kangakanani uyilo lwakho lwewebhu, ukuphumeza ii-pop-ups ezininzi kakhulu kuya kunciphisa kakhulu i-UX kunye nokwoneliseka kwabathengi, okukhokelela kwinqanaba lokuguqula elisezantsi.
Endaweni yokuvelisa ukhokelo oluninzi, uya kufumana inqanaba lokubhabha eliphezulu kunye nokwehla kwetrafikhi. Ngapha koko, ngokophando olwenziwe yi Umdibaniso weNtengiso eziNgcono, Olunye lweentlobo zentiyo yentengiso yeselula zezi zilandelayo:
Ukudlala ngokuzenzekelayo iividiyo
Oopopayi abaqhubeka bedanyaza
Iintengiso ezinokubala ixesha ngaphambi kokugxothwa
Amaphepha ewebhu eselfowuni angaphezulu kwe-30% yeentengiso
4. Yenze ibelula ngokuPhuma okuNgenamthungo
Ukulahla ukuphuma kuqhelekile. Isizathu silele kuyilo olubi lwephepha lokuphuma. Zininzi izinto ezibangela ukuba abathengi bashiye iimveliso kwinqwelo yokuthenga ngaphandle kokuzithenga. Ngokwesiqhelo, abanakufumana iqhosha lokucofa, okanye iphepha linzima kakhulu ukuhamba.
Ke ngoko, iphepha lokuphuma kufuneka ligcinwe licocekile kwaye lincinci. Indawo emhlophe kunye nokusasaza amanyathelo kumaphepha amaninzi kuya kunceda. Amaqhosha kufuneka afake umthengi kwi-odolo elungileyo yenkqubo yokuphuma.
5. Yongeza ezinye iindlela zokuhlawula
Inqanaba lokuphuma yindawo apho unokuguqula iindwendwe zibe ngabathengi bokwenyani. Ke ngoko, kufanele ukuba ilungiselelwe intengiselwano egudileyo kunye nokuguqulwa okuphezulu.
Sukulindela ukuba bonke abathengi bakho basebenzise iPayPal ukuhlawulela iiodolo zabo.
Ishishini le-e-commerce kufuneka lihlale lijonga ukuguquguquka. Ngaphandle kwamakhadi okuthenga ngetyala okanye iintlawulo zebhanki, unokufuna ukongeza iApple Pay, kwaye uGoogle uhlawula kumjelo wentlawulo kwiwebhusayithi yakho. Isipaji sedijithali sikhula kancinci, ekufuneka amashishini e-e abone kwangaphambili kwaye asebenzise ithuba.
Njengoko ii-smartphones ziqhubeka nokulawula ilizwe, amashishini kufuneka afunde ukuziqhelanisa.
Maninzi amathuba agciniweyo kwisitishi esiphathwayo. Konke okudingayo kuyilo olulungileyo kunye nokusebenza ngokuthe rhoqo. Gcina abathengi bakho bonwabile ngesisombululo sakho sewebhu ngokwenza yonke into icwangciswe kakuhle.
Kodwa kukho indlela ebhetele yokwenza izinto. Unokufumana uncedo kwiingcali. Ukusebenza kwefowuni kunokuba nzima, kodwa ngoncedo loyilo lwewebhu uDerry ungayenza yonke ngefinesse. Kwaye ungonga ixesha lokujonga kwezinye iindawo zeshishini lakho.
tags: Ukudlala ngokuzenzekelayo ividiyoumanyano lweentengiso ezingconoukubala iintengisouguqulo mobileUkulungiswa kwefowunipopup yeselfowuniisantya sokuhambaIsantya sewebhusayithi eshukumayoukuphuma ngaphandle komthungo
UJack Poyntz Studio yinkampani yoyilo lwewebhu kunye neengcali eziqinisekisiweyo zeVenkile. Bajolise ekunikezeleni izisombululo zewebhusayithi yokuyila ukunceda iinkampani ezinamabhongo ukuba zikhule kwi-Intanethi. Bamkela imingeni emitsha ngomnqweno wokunceda abathengi babo baphumelele.
Izixhobo eziBalaseleyo zokuBhala ngokuMangalisayo zeNtengiso